कसरी भयो प्रधानमन्त्रीको ‘डोमेन’ दुरुपयोग ? - Rajmarga
सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत जानकारी समेटिएको वेबसाइट लामो समयदेखि दुरुपयोग भएको पाइएको छ। सरकारले दुई वर्षअघि पोर्न साइटलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रधानमन्त्रीकै नामको डोमेनमा भने सयौं पोर्न भिडियो अपलोड भएका छन् ।
उनका अनुसार यो वेबसाइट नेपालमा बन्द गर्ने तयारी छ। ‘इन्टरनेट कम्पनीसँग सहकार्य गरी नेपालभित्र बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ’, उनी भन्छन्। नेपालको निजी क्षेत्रको इन्टरनेटप्रदायक कम्पनी वल्र्ड लिंकले यो साइट बन्द गरेको छ। तर अन्य इन्टरनेटप्रदायक कम्पनीबाट अहिलेपनि खुलिरहेका छन् ।
ओली २० फेब्रुअरी २०१८ (२०७४ फागुन ३ गते) दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि यो डोमेन नवीकरण भएन। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नयाँ डोमेन केपीशर्माओली डटकम डटएनपी दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्यायो। त्यही वेबसाइट अपडेट छ। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
Previous Previous post: वाईफाई स्लो भएर काम गरेन? यसरी बढाउनुहोस् स्पिड
Next Next post: पसिना बगाएको पैसा मदिरामा स्वाहा
कोरोनाभाइरस महामारी दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै ठूलो चुनौती: राष्ट्रसंघ महासचिव